Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE oo cambaareeyey go’aanka Madaxweyne Riyaale ku gaadhey in aanu saxaafadda uga warramin socdaaladiisa iyo Jawaabo ay ka bixiyeen Wasiirro | Somaliland.Org
February 28, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee KULMIYE, Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa cambaareeyey go’aanka Madaxweyne Riyaale ku gaadhey in aanu u warramin saxaafadda marka uu dibadda u dhoofayo iyo marka uu ka soo noqdoba. Waxana uu ku tilmaamay taas macnaheedu inuu yahay in Madaxweynuhu diidey inuu u warramo ummadda xilka u dhiibatey.
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE, Xaaji Axmed Maxamed Siilaanyo, waxa arrintan ku soo qaaday hadal uu ka jeediyey furitaanka Shirweynaha Saddexaad ee ururka Suxufiyiinta Somaliland (SOLJA) oo maanta lagu qabtay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa.
“Maadaama waxa aynu ka hadlaynaa uu saxaafad yahay, waxyaabaha ugu dambeeyey ee yaabka lahaa waa maxay?,” ayuu yidhi Guddoomiyuhu.
“Waxa weeye Madaxweynaheennii oo dal dibadeed u baxay oo yidhi saxaafadda u warrami maayo, markaan soo noqdona u warrami maayo, markaan tegayona u warrami maayo,” ayuu raaciyey.
Waxana uu sheegay in Madaxweynuhu aanu diidin saxaafadda ee macnaheedu yahay in uu diidey ummadda uu xilka u hayo.
“Markuu yidhi saxaafadda u warrami maayo, macnaheedu waxa weeye dadweynaha iyo Jamhuurka iyo ummadda u warrami maayo, xilkaan ugu maqnaa uga warrami maayo, waxaan ugu maqnaa uga warrami maayo,” ayuu yidhi Mudane Axmed Siilaanyo.
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE, waxa uu sheegay in Madaxweynuhu uu xaq u leeyahay fasax uu dibadda ugu baxo, isaga oo xusay in Madaxweynayaasha dunidu ay fasax qaataan oo qoysaskooda iyo caruurtooda la dhoofaan, saxaafaddana afka ka xidhaan, balse, waxa uu sheegay in safarkaas ay jeebkooda kala baxaan kharashka.
“Laakiin, markaad ku dhoofayso Calaa xisaabul Ummah [Hantida Ummadda] ee kharashkii dowladdee qaranku lahaa ee weliba taagta darraa aad isticmaalayso ee aad marwalba kaxaysanayso dad badan oo aan loo baahnayn, ee aad haddana tidhaahdo saxaafadda u warrami maayo…” ayuu yidhi Guddoomiyuhu.
Waxana uu sheegay in markaa ay saxaafadda iyo dadweynuhuba ay xaq u yeelanaynaan inay cabiraan waxa ay doonaan, balse, waxa uu sheegay in saxaafadda, mucaaridka iyo dadweynuhuba ay aad isu dhawreen marka la eego dareemadii iyo wararkii ka soo baxay socdaalkii Madaxweyne Riyaale ku tegey dhowaan Imaaraadka Carabta.
“Imisa sheekaynu ka maqalay trip-kan u dambeeyey Madaxweynuhu wuxuu u baxay. Sheekooyinkaynu ka maqalay aad bay inoo wareeriyeen, kolley idinkuba qaar badan baad maqasheen, laakiin anigu waxba ku celcelin maayo,” ayuu yidhi Axmed Siilaanyo.
Hase yeeshee, waxa uu ugu baaqay Madaxweyne Riyaale inuu ixtiraamo saxaafadda oo uu sheegay inay ka mid tahay hay’adaha qaranka, isla markaana sida Madaxweynaha laftiisa loogu ixtiraamayo inuu yahay Madaxweynaha qaranka iyo xilkiisaba, uu u ixtiraamo saxaafadda iyo xilka ama shaqada ay qaranka u hayso. Waxana uu u soo jeediyey inuu ka noqdo hadalkaa ah in aanu saxaafadda mar dambe u warramayn.
“Saxaafadda warka waxa loo marinayaa dadweynaha, dadweynuhuna waajib buu kugu leeyahay oo xaq buu kuugu leeyahay,” ayuu yidhi Guddoomiyuhu soo jeedintiisa ku wajahan Madaxweyne Riyaale.
Jawaabta Wasiirrada: Wasiirka Warfaafinta Somaliland, mudane Axmed X. Daahir Cilmi iyo Wasiirkuxigeenka Caddaaladda, mudane Yuusuf Ciise Ducaale (Tallaabo) oo shirkaas ka hadlay ayaa jawaabo kala duwan ka bixiyey arrintan uu ka hadlay Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE.
Wasiirka Warfaafinta, mudane Axmed X. Daahir ayaa ku tilmaamay go’aanka Madaxweyne Riyaale ku gaadhey in aanu saxaafadda u warramin socdaaladdiisa dibadda iyo soo noqodkiisaba inay noqon karto mid uu u sameeyey lexejeclada dalka iyo in aan cadowgu ogaan waxa Somaliland u socda.
“Madaxweynuhu wuu aamusay. Oo biluu dan moodey oo uu gartay maanta xilligan aynu joogno armaa cadowgeennaa badane haddii wax inaga fakadaan ay wax kaleba ina geliyaan. Taana ku darsada,” ayuu yidhi Wasiirku.
Waxana uu intaa ku daray in Madaxweynuhu uu iminka aamus ku deyayo arrinta, isaga oo sheegay in wax badan la hadlay, taas oo uu u aaneeyey inay sii fogeysey baadi goobka waxa ka dhiman Somaliland.
“Madaxweynuhu wuxuu ballan ku qaaday wuxuu ku maqnaa in aanu ka hadlin, laakiin la arko oo la taabto,” ayuu yidhi Wasiirka Warfaafintu.
“Ee waxaynu ka sugi waxaa la taabanayo, lana arki, ee laakiin, yaan lagu degdegin,” ayuu raaciyey Wasiirku.
Wasiirkuxigeenka Caddaaladda, mudane Yuusuf Ciise Tallaabo ayaa isagu shirkaas ku soo bandhigay cabasho uu wax kaga sheeganayo saxaafadda madaxa bannaan, isaga oo sheegay inay ku soo rogeen xayiraad ah inay wax ka qoraan, taas oo uu ku tilmaamay cabudhin, caddaalad-darro iyo xadgudub lagu sameeyey xuquuqdiisa. Sidaas darteedna, waxa uu sheegay in isagu uu ku diirsaday go’aanka Madaxweynuhu ku gaadhey in aanu u warramin saxaafadda.
“Aniga saaka inyar oo culays ah oo is saarnayd way iga degtey markii la yidhi Madaxweynihii baaba wada cabudhiyey [saxaafadda] oo aan midh u sheegin markii saaka Axmed [Siilaanyo] lahaa mabsuudbaaban noqdoo, waxaan idhi isagaaba kaaga gooyey intii ay ku cabudhiyeen,” ayuu yidhi Tallaabo.
“Idinkuna laba kala daaya inaad tidhaahdaan yaan nala cabudhin iyo inaad idinku wax cabudhisaan,” ayuu raaciyey.
Wasiirkuxigeenka Caddaaladda, mudane Yuusuf Ciise Tallaabo oo aan isaga shirka lagu martiqaadin, waxa uu sheegay inuu u yimi inuu suxufiyiinta halkaa ku shiraysa u soo bandhigo cabashadiisa oo ah in saxaafadda madaxa bannaani ku soo rogtey xayiraad, taas oo ay isku raaceen in aanay faafin wararkiisa, kana qaybgelin shirarkiisa jaraa’id. Waxana uu sheegay in xayiraaddaasi ay haysatey muddo dhawr bilood ah.
Wasiirkuxigeenka Caddaaladdu waxa uu si sarraaxad ah u qirtay in colaadda iyo dagaalka saxaafaddu uu wax badan yeelay, isaga oo xusay in suxufiyiintu ay olole u galeen in aan Golaha Wakiilladu ansixin, qaybna ay ka qaateen sababta codkii yaraa ee goluhu ku ansixiyey.